Ndeapi mamwe maekisesaizi kune vanhu vane mawiricheya? | Karman® Mawiricheya
Kune vazhinji exercises vanhu vacho mukati mavhiripu vanokwanisa kuita kuwedzera kutsungirira, kufamba, mhasuru uye kudzivirira kurwadza kwemajoini kana kukuvara. Wese munhu ane akasiyana pokutangira. Zvakaoma kune vakawanda kutanga kurovedza muviri uye kuti imwe rutsigiro inogona kuita mutsauko. Heano mamwe matipi ekurovedza muviri asi yeuka kubvunza chiremba wako usati watanga chero kurovedza muviri kutsva hurumende.
Mumwe anofanirwa kugara achidziya paanorovedza dzivirira kukuvara uye kuwedzera kudzidzira. Kugara wakananga tambanudza maoko ako kumberi wozokwevera wakananga kuchipfuva pushing mapepa kumashure anogona kubatsira kufamba, kudziisa mhasuru uye kujoina majoini. Imwe yekudziya-imwe yaunogona kuita kuunza ruoko rumwe pasi uye imwe kumusoro uye kutambanudza kumashure uchichinja. Kudziya kwekupedzisira kunogona kubatsira kuyerera kweropa kuri kusvika kumusoro mudenga nemaoko maviri wobva wakotamisa pasi kudivi kuti magokora abate pamusoro pehudyu. It yakakosha kudzora kufema uku uchitambanudza kubvumira oxygen kumhasuru dzako.
Asati atanga kuyera huremu munhu anofanira kufunga kuti ndeupi huremu hwakanakisa kutanga nawo. Vamwe vachatanga nekujairira kutambanudza uye kuwana kutonga kwekufamba kudzivirira kukuvara. Vamwe vane ruzivo nekusimudza uye vanokwanisa kutanga neimwe huwandu hwehuremu. Muzviitiko zvakawanda, manejimendi anokurudzirwa kubatsira kubatsira nerutsigiro mupfungwa nepanyama.
Simple kurovedza siyana kubva pakumhanya zvishoma nezvishoma kusvika kumhanya nekukurumidza kubvumidza iyo yekuwedzera kurovedza muviri. Pombi yechibhakera inoitwa nekugara mudenga yakatwasuka uye kukotamisa maoko padivi pemativi ako nekusvika kumusoro mudenga wobva wadzosa pasi zvakare. Mushure memakumi gumi switch kune inotevera ruoko uye dzokorora for akati wandei seti.
Another kurovedza muviri ndiko chibhakera chepadivi nekurovera kune rimwe divi kwozoti rimwe rine control. Izvi zvinobvumira musana kutambanudza uye kuwana kutonga pamwe nemhasuru. Kusvika pamusoro pemusoro neruoko rumwe ruoko rumwe ruchizorora kudivi rako uye uchidzokorora nerumwe ruoko kumwe kuita kuri nyore.
kushandisa dumbbells yehuremu hunodiwa munhu anogona kuita curl-ups nekuisa gokora pamabvi wobva warimonera kumusoro kuchipfuva. A kurovedza muviri pachifuva izvo zvinogona kuitwa nema dumbbells chipfuva kusunda, inofungidzira a kusunda-kumusoro asi anowedzera simba kuseri kweruoko. Izvi zvinoitwa nekutambanudza maoko kumberi nehuremu uye kuunza huremu hwakananga kumapfudzi kushandisa kusunda-kumusoro.
Kune vazhinji exercises nezviyereso wiricheya vashandisi vanogona kuzviita zviri nyore asi zvichishanda. Ita shuwa kukumbira chiremba kuti vabvumirwe kutanga.
Kuti uwane rumwe ruzivo rwekuti ungaita sei kusimbisa muviri tarisa chinyorwa pazasi: